Global Voices teny Malagasy » Ireo Sary Miloko Mampiseho Ny Faharavàn’i Manila Taorian’ny Ady Lehibe Faharoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Febroary 2016 2:15 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Saripika, Tantara
Sary milokon'ny trano fitsaràna teo aloha simba nandritra ny Ady tao Manila. Sary avy amin'ny gazety ofisialim-panjakana Filipiana.
Nandritra ny Ady Lehibe II, nipetrahan'ny Tafika Imperialy Japoney i Manila. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1945, nanafaka ny renivohitr'i Filipina ireo hery Amerikana sy ireo Filipiana mpiady anaty akata, taorian'ny ady iray volana. Noho ny ady nivaivay sy ireo zera baomba goavana, i Manila no renivohitra faharoa tena rava indrindra tamin'ireo Mpiaradia (nanaraka an'i Varsovia, Polonina) nandritra ny Ady Lehibe II.
Ny taona 2015, ho fahatsiarovana ny faha-70 taonan'ilay fandatsahan-drà, nandefa vavahadin-tserasera  ny fanjakana Filipiana, izay manasongadina ireo sary , lahatsary, famakafakana, sarintany, fijoroana vavolombelona, ary ireo tatitra hafa  fampitamberenana ny tantaran'ilay ady manan-tantara. Manome ireo sary miloko n'ireo tranobe sasany sy ny fisehon'ny ady tao Manila taloha ihany koa ilay angona manokana.
Nandritra ny ady tao Manila, nihoatra ny 100.000 ireo sivily maty ary tena saika rava avokoa ireo tranobem-panjakana tao an-tanàna. Mamintina fohy ny zava-misy tao an-drenivohitra taorian'ny ady ny fanjakana:
100.000 ireo Filipiana maty, nitsinkasina anaty faharavàna ireo tranom-panjakana- ary tsy Voahangin'ny faritra Atsinanana intsony i Manila. Ilay tanàn-dehibe izay namiratra indray mandeha tany sy ivontoerana voalohany fihaonan'ireo olona samihafa fihaviana ka nampitambatra ny Atsinanana sy Andrefana, nanjavona tototr'ireo faharavàna.
Fongana avokoa vokatry ny fahapotehan'ny tanàna ny lovan'i Manila tamin'ny eoropeana (zanatany Espanola i Filipina nandritra ny 300 taona). Manampy ny famintinan'ny governemanta:
Very ireo tanjaky ny kolontsaina sy ny maha-Filipiana azy tsy hita vinaniana. Ireo tranobem-panjakana, ireo anjerimanontolo sy sekoly, fiangonana ary koa ireo andrim-panjakana hafa, fongana niaraka tamin'ireo zava-tsarobidy tao aminy. Niharan'ny fahapotehana mba hanomana ny lalana ho an'ny fivoarana ireo tranobe. Midika izany ho fanalàna ny maritrano eoropeana eo an-toerana ary soloina maritrano manana endrika amerikana azo ampiasaina, izay hitarafana ny maro amin'ireo tranonay ankehitriny. Vitsivitsy monja amin'ireo fanorenana tany amboalohany no mba tavela tsy voakitika.
Ndeha isika hanopy maso ny sasany amin'ireo sary milokon'i Manila tranainy taorian'ny ady. Mifanaingina amin'ny endriny ankehitriny koa ireo sary sasany :
Sary milokon'ireo miaramila Amerikana nandritra ny Ady tao Manila. Sary avy amin'ny gazety ofisialim-panjakana Filipiana
Sary milokon'ny afovoan-tanàna rava tao Manila. Sary avy amin'ny gazety ofisialim-panjakana Filipiana.
Sary mifanaingin'ireo miaramila miampita ny Renirano Pasig sy ny endriny ankehitriny. Sary avy amin'ny gazety ofisialim-panjakana Filipiana
Sary milokon'ireo miaramila eo alohan'ny lapam-panjakana. Sary avy amin'ny gazety ofisialim-panjakana Filipiana
Sary mifanaingin'ireo miaramila Japoney manao diabe eo akaikin'ny lapam-panjakana sy ny endriky ny làlana ankehitriny. Sary avy amin'ny gazety ofisialim-panjakana Filipiana
Namboarina mba ho fahatsiarovana ireo sivily maty nandritra ny ady tao Manila ity tsiahy ity. Sary avy amin'ny gazety ofisialim-panjakana Filipiana
Manasongadina ny fahitàna ny faharavàna nateraky ny ady ity lahatsary  tahiry tsy fahita firy ity, nalaina tamin'ny fakantsary miloko Kodak.
Raha ireo miaramila Japoney no tena omena tsiny noho ny fahafatesana  sivily an'arivony, niampanga ny tafika Amerikana ihany koa ho nanjera baomba tamin'ireo tranobem-panjakana sy ireo fotodrafitr'asa hafa izay nandrava ny toekarem-pirenena, ny mpanao tantara sasantsasany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/15/79048/
 tatitra hafa: https://www.youtube.com/watch?v=UdfxZrqvq1c&index=1&list=PLIcUoXKTZ0KWXjXivC_RK5wwc084lZvsz
 Mamintina : http://malacanang.gov.ph/battle-of-manila/